Autodesk 3ds Max software များနှင့် သူ၏ ဆက်စပ် application များ [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > ကွန်ပျူတာ ဆိုင်ရာ( Engineering အပါအ၀င်) > Graphic Design > 3D Studio Max > Autodesk 3ds Max software များနှင့် သူ၏ ဆက်စပ် application များ
View Full Version : Autodesk 3ds Max software များနှင့် သူ၏ ဆက်စပ် application များ
ဒီခေါင်းစဉ်လေးအောက်မှာ max နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး software တွေ..plugin တွေ အကုန် စုပြီးရှယ်ကြရအောင်နော်။ :)
Autodesk 3ds Max 2010 Win32 Portable | 2.2 GB
Explore, validate, and communicate your ideas with Autodesk® 3ds Max Design 2010 software—a comprehensive 3D modeling, animation, and rendering solution that supports the way architects, designers, engineers, and design visualization specialists approach their projects—from initial concept models to final, cinema-quality presentations. Digital continuity with the AutoCAD, Revit, and Autodesk Inventor software product families makes 3ds Max Designakey solution for seamless digital visualization workflow.
* Graphics card that supports Direct3D ® 10, Direct3D9or OpenGL ® † (at least 256 MB of memory for your video card is recommended 1 GB or more)
* Drive DVD-ROM † †
media fire လေးနဲ့ ပြန်တင်ပေးကြပါဗျို့..း)
အကိုလိုချင်ရင် ညီလေး တင်ပေးပါ့မယ်အကို ။
ဖိုင်ဆိုက်က 4.12 GB မို့လို့ မေးကြည့်တာပါအကို ။
လောလောဆယ်တော့ ညီလေး ကီးဂျန်းတင်ပေးထားပါတယ်အကို ။
ကျွန်တော် အတွက် ထက် တစ်ခြားသူတွေ အတွက်ပါ...fileserve ဆိုတာက hotfile တို့ rapidshare တို့လိုမျိုး ၀ယ်ထားကြတဲ့သူလဲ နည်းတယ်..
နောက်တစ်ခုက ဖိုရမ်မှာ ပို့စ်တစ်ခု တက်ထားပြီး အခုလိုလင့်နဲ့ဆိုတော့ အသုံးပြုဖို့မလွယ်လောက်ဘူးထင်တယ်..ဖြစ်နိုင်ရင် အများလွယ်ကူတာမျိုးလေးတွေ
ဖြစ်စေချင်တာပါ.. :) .နို့မို့ဆို ကျေးဇူးတွေပဲ တင်ထားပြီး ဒီတိုင်း ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ပါ ..
ကျေးဇူးပါပဲ ကိုပါကြီးရေ ..
အခုလို သတိပေးတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ ..
အကိုရဲ့ စေသာနာကိုလည်း ညီနားလည်ပါတယ် ..
ကျွန်တော်လည်း ရှာတွေ့ တာလေးတွေ အသုံးဝင်မယ်ထင်ဟာတွေ ရှာတွေတဲ့ ဆိုဒ်ကနေ တိုက်ရိုက်တင်ပေးလိုက်တာပါ …
Hotfile လင့်တွေကို ကိုဖိုးလပြည့် ပြောင်းတင်ပေးနေပါတယ်။ (ကျွန်တော်လည်း သူ့ ဆီကနေ အကူညီတောင်းထားပါတယ်။)
ကျွန်တော်လည်း ဖိုင်ဆိုဒ်သေးတယ်ဆိုရင် အတက်နိုင်ဆုံး လင့်ပြောင်းပြီး တင်ပေးပါတယ်။
ကျွန်တော်ဆီက ကွန်နက်ရှင်နဲ့Ifile မှာ Upload တင်မယ်ဆိုရင်တော့ အနည်းဆုံး (၁၅) မိနစ် (or) မိနစ် (၂၀)လောက်ကြာပါတယ် .. :e
မရှိတာထက်စာရင် ရှိပြီး လိုအပ်မယ်ဆို ဒေါင်းလုဒ်လင့် အဆင်မပြေရင်တောင် ကိုဖိုးလပြည့် ပြန်တင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ အထင်နဲ့ကျွန်တော်ပို့ စ်တင်ပေးခဲ့ ပါတယ် ….
နောင်ကိုလည်း ဒီလို့လင့်မျိုးဆိုရင် အတက်နိုင်ဆုံး ကျွန်တော်ရှောင်ပါမယ် ...
(ပို့စ်တစ်ခု တင်ဖို့ အတွက်တောင် ခုဆို ကျွန်တော် လက်တွန့် သွားမိတာ အမှန်ပါပဲ :e)
ပို့စ်အရေအတွက် များရင်ပြီးရော ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးနဲ့မည်သည့်ပို့စ်ကိုမှ ကျွန်တော် မတင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ ကျွန်တော် လိပ်ပြာသန့် ပါတယ် …
ကျွန်တော်ပြောတာ အမှားပါခဲ့ မယ်ဆိုရင် မသိနားမလည်တဲ့ညီငယ်တစ်ယောက်အဖြစ် ခွင့်လွှတ်နားလည်စေချင်ပါတယ် .. :7:
တကယ်ကို အသုံးမ၀င်ခဲ့ ဘူးဆိုရင်လည်း ဒီတော့ပစ်လေး(Autodesk 3ds Max Design 2011 Portable with V-Ray 1.50 SP4 )ကို ဖျက်ပေးပါလို့.. ကျွန်တော် တောင်းဆိုပါတယ် ခင်ဗျာ ..
ကိုပါကြီးပြောတာက rapid တို့ ၊ hotfile တို့ လူတိုင်းမရှိနိုင်တဲ့အတွက် ဒေါင်းဖို့ မလွယ်ကူလှပါဘူး။
အဲဒါလဲ ဟုတ်ပါတယ် ။
ညီလေးကလဲ စေတနာနဲ့ တင်ပေးလိုက်တယ် ။ လိုချင်တဲ့သူရှိလို့ လင့်ပြောင်းခိုင်းရင် အဆင်ပြေတဲ့တစ်ယောက်ယောက်က ကူညီပေးမယ်ပေါ့။
အားလုံးကစေတနာထား ကူညီပေးကြပါတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ညီလေးကလဲ အခုလို ပြောလို့ တစ်မျိုးမထင်ပါနဲ့ .. ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုပါကြီးပြောသလိုမျိုး မြန်မာနိုင်ငံဒေါင်းလို့ ရနိုင်မဲ့လင့်တွေကို ပိုအဆင်ပြေပါတယ်ညီလေး။
အရင်လိုပဲ စိတ်သန့်သန့်နဲ့ပဲ ဆက်လက်ကူညီပေးပါညီလေး ။
အစ်ကိုပြောတာ ညီ ဖိုရမ်မှာ သုံးရင်းနဲ့ နားလည်လာပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ညီလေး ရာမည ပြောသလို မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စဉ်းစားပေးလို့ပါ။
အစ်ကိုတို့ စလုံးမှာတောင် hotfile နဲ့ rapidshare ဆို ၀ယ်ထားတဲ့ သူတွေ များတော့ လိုခဲ့ရင် ကူညီပေးလို့ရနိုင်သေးတယ်။
ညီလေး ရာမည ပြန်သွားပြီ ဆို ဒါတွေ ဟာ အခက် အခဲ အများကြီးဖြစ်နိုင်လို့ပါ...ညီတင်တဲ့ post တွေနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး...
အစ်ကိုတို့ ပြောတာ လင့်လေးတွေက တတ်နိုင်သမျှ လိုအပ်တဲ့သူတွေ အတွက် အဆင်ပြေစေချင်လို့ ပြောကြတာပါပဲ...
အခု ဒီ portable လေးက ဗီရေးပါ တစ်ခါတည်းတွဲပါနေတဲ့ အတွက် သုံးနေတဲ့ သူတွေ အတွက် အတော် တန်ဖိုးရှိလို့ ပြောတာပါ။
ညီ အချိန်ပေးပြီး တင်ပေးတာကိုက စေတနာ မပါပဲ လုပ်လို့ မလွယ်ပါဘူး....စိတ်သန့်သန့်နဲ့ပဲ ဆက်လက်ကူညီပေးပါညီ :)
အခုလို ညီငယ်တစ်ယောက်လို ရှင်းပြပေးတဲ့ ကိုဖိုးလပြည့် နှင့် ကိုပါကြီး ကို ကျွန်တော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..
ကျွန်တော် လူငယ်ပီပီ စိတ်ထဲ နည်းနည်းခုသွားလို့ ပါ .. ကျွန်တော် အမှားအတွက် ၀န်ပိစေတယ်ဆိုရင် တောင်းပန်ပါတယ် ..
တစ်မျိုးထင်မိတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး .. ကျွန်တော်ဘက်က အခက်အခဲ ကိုပြောပြမိတာပါ ....
နောင်တစ်ခုက ငါတင်တဲ့ ပို့စ်များ ဖိုရမ်အတွက် အလကား ဖြစ်စေမိတာလား ဆိုပြီး ထင်မိလို့ ပါ ..
ကျွန်တော် အတက်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားကြည့်ပါမယ် ..ဖိုင်ဆိုဒ်အရမ်းများလို့လင့်မချိန်းပေး ဖြစ်ခဲ့ ဘူးဆိုရင်လည်း နားလည်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေ ...
အခုလို အားပေးတဲ့ အတွက် ကိုဖိုးလပြည့်နှင့် ကိုပါကြီး ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...
ကျွန်တော် တင်တဲ့ ပို့စ်တစ်ခုက တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် အကျိုးရှိစေမယ်ဆိုရင် ပဲ ..ကျွန်တော်အချိန်ပေးရကျိုးနပ်ပါပြီ ...
ဒါလေးက hot file download link လေးပါ..
ဒါက uploading နဲ့ပါ
Autodesk 3ds Max 2011 Subscription Advantage Pack Win32 64
Autodesk 3ds Max 2011 Subscription Advantage Pack Win32 64 | 171 MB
The Autodesk® Subscription Advantage Pack for Autodesk® 3ds Max® 2011 software integrates state-of-the-art technology from renowned industry companies who are working with Autodesk to revolutionize rendering and simulation workflows. Featuring lightweight, resolution-independent procedural textures; GPU-accelerated rigid-body dynamics; and one of the world’s first physically accurate “point-and-shoot” renderers, the Advantage Pack for 3ds Max 2011 delivers cutting-edge tools that help leverage the latest hardware advances to help customers maintain their competitive advantage.
Achieveavast range of look variations withanew library of up to 75 Substance procedural textures. These dynamic, resolution-independent textures haveatiny memory and disk space footprint, making them very good for exporting to games engines via the Allegorithmic Substance Air middleware offering; integration is currently provided for Unreal® Engine3game engine, Emergent&#039;s Gamebryo game engine, and Unity. Alternatively, textures can be baked to bitmaps for use with certain renderers. Some examples of dynamically editable and animatable parameters are: brick distribution, surface aging, and mortar thickness inabrick wall; pupil size, eye color, and extent of veining in an eye texture; and the age, roughness, curb borders, and lane markings ofastreet texture.
Create more compelling, dynamic rigid-body simulations directly in the 3ds Max viewport. The multi-threaded NVIDIA® PhysX® engine supports static, dynamic, and kinematic rigid bodies (the latter for rag doll simulations), andanumber of constraints: Rigid, Slide, Hinge, Twist, Universal, Ball &amp; Socket, and Gear. Animators can more quickly createawider range of realistic dynamic simulations, and can also use the toolset for modeling: for example, creatingarandomly placed landscape of rocks. Assigning physical properties – friction, density, and bounciness – is as simple as choosing fromaset of initial preset real-world materials and tweaking parameters as required.
Download Link အဆင်မပြေပါက ထပ်မံ၍ တောင်းဆိုနိုင်သည်။
date: April 08th, 2010 type: 3D size:2ISO ,
Autodesk 3DSMAX + Samples Description: Autodesk 3ds Max 2011 software offers compelling new techniques for creating and texturing models, animating characters, and producing higher-quality images. Enhancements to the modeling texturing, and animation toolsets help significantly increase productivity, whileanew node-based material editor, high-quality hardware renderer, and fully-featured compositor make creating stunning photo-realistic images easier than ever http://www.autodesk.com Installation: Unpack, burn or mount with D-Tools &amp; install Check Crack/install.txt on DVD No Lame Patching, no problems with updates, no problems exporting toa&quot;legal&quot; version, no trial patched, no files modified etc The one and only way to do it - KEYGEN - fully activated
ဒီထဲမှာ တင်ထားတဲ့ လင့်တွေ တစ်ခုမှ ဒေါင်းလို့ မရပါဘူး.. အကုန်လုံး file not found တွေ ချည်းပါပဲ.. တစ်ခုလောက် အကြံပေးချင်ပါတယ်။ မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာ ဖိုရမ် အနေနဲ့ server လေးတစ်ခုလောက် ၀ယ်ပြီး ဖိုင်းတွေ upload တင်ဖို့ နေရာလေး လုပ်ပေးရင် ပိုအဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်.. charges ကြောင့် ဆိုရင်တော့ အားလုံး တစ်ယောက် နည်းနည်းဆီ မျှခံ ကြတာပေါ့.. သိပ်လဲ ဈေးမကြီးပါဘူး.. အဲ့ဒါဆို.. ဒေါင်းလို့ မရတဲ့ ပြဿနာတွေ မဖြစ်တော့ဘူး..